October 12, 2020 - Khitalin Media
နစ်နာ စရာရှိရင် မိန်းခလေးတွေပဲနစ်နာရတာမို့ သတိလေးထားကြပါနော်
October 12, 2020 by Khitalin Media
ငါ့သမီးကို အမေမှာချင်တယ်”ငါ့သမီးလေးရယ် ဖေ့စ်ဘုတ်သုံးတာတော့ ခေတ်သဘာဝမို့ အမေမပြောလိုပါဘူးသမီးရယ် ဒါပေမယ့် မေမေမှာချင်တာက…ဖေ့စ်ဘုတ်ပေါ်မှာ တရားဝင်လက်ထပ်ထား ခြင်းမရှိဘဲ ရည်းစားတွေ တစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက်ထားပြီး ဓာတ်ပုံတွေ တွဲရိုက် တွဲတင်နဲ့ မေမေသူများတွေပြောလို့ အကုန်သိပြီးပြီ သမီး …သမီးရယ် … သမီးရည်းစားက တကယ်လို့သမီးနဲ့ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်မရခဲ့ဘူး မယူဘူးဆို ရင် ငါ့သမီးဘဝလေးကို ဘယ်ယောက်ျားလေးက တန်ဖိုးထားမှာလဲပြီးတော့မေမေတို့ မျိုးရိုး ဂုဏ်သိက္ခာတွေကိုလည်း ငဲ့ကြည့်ပါဦးသမီးရေ …ခုတော့ … သမီးက ငါ့ရည်းစားလေး ဘယ်လောက်လှတယ် ဘယ်၍လှတယ်နဲ့ ကြွာချင်ပြီး လိုင်းပေါ်တွဲတင်တော့မေမေတို့ကို ပတ်ဝန်းကျင် က ပြောလာပြီ သမီးရေ မဆုံးမဘူးလား မအုပ်ချုပ်ဘူးလားတဲ့။ နောက်တစ်ခါ ဖေ့စ်ဘုတ်ပေါ်မှာ ရည်းစားနဲ့ ဓာတ်ပုံ တွဲတင်တော့ မယ်ဆိုရငဖေဖေမေမေတို့ရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာတွေကို ပြန်မြင်ယောင်ပေးပါ သမီးလေးရေ ။အမျိုးကောင်းသမီးလေးတို့ အသိတရား … Read more
ဗိုက်ပြုတ်ဆေးနည်းလေး တင်ပေးဆိုလို့ တင်ပေးလိုက်ပြီနော် ဗိုက်ပြုတ်ဆေးနည်းလေး တင်ပေးဆိုလို့ပါ သံပုယိုသီ3းလုံး, ကြက်သွန်ဖြူအတက်ကြီး5တက်, ဂျင်းအနေတော်အတက် တစ်တက်!! ပထမဆုံး သံပုယိုသီးကို 4စိတ်ထိုး, ကြက်သွန်ဖြူ5တက်အခွံခွါ, ဂျင်းကိုအခွံခွါ ပါးပါးလှီး!! ရေ2လီတာ ပွက်ပွက်ဆူထဲကို ခုနကလှီးတာတွေထည့်ပီး နာရီဝက်ပြုတ်!! ပြီးရင်အဖတ်တွေဆယ်ပီးပစ်လိုက်ပါ!! အရည်ကိုအအေးခံပီး အစာမစားခင်နာရီဝက်အလိုမှာ ဖန်ခွက်တစ်ခွက်စာသောက်ပေးပါ!! တစ်နေ့3ကြိမ်ပေါ့!! တစ်ပတ်ကြာရင် ဗိုက်ပြုတ်သွားပါတယ်တဲ့ ကျမလဲအခုမှလုပ်ကြည့်တာပါ ချစ်တို့လဲ လုပ်ကြည့်ဖို့ တိုက်တွန်းပါတယ်ရှင် Thida Myint Unicode ဗိုကျပွုတျဆေးနညျးလေး တငျပေးဆိုလို့ပါ သံပုယိုသီ3းလုံး, ကွကျသှနျဖွူအတကျကွီး5တကျ, ဂငျြးအနတေျောအတကျ တဈတကျ!! ပထမဆုံး သံပုယိုသီးကို 4စိတျထိုး, ကွကျသှနျဖွူ5တကျအခှံခှါ, ဂငျြးကိုအခှံခှါ ပါးပါးလှီး!!’ ရေ2လီတာ ပှကျပှကျဆူထဲကို ခုနကလှီးတာတှထေညျ့ပီး နာရီဝကျပွုတျ!! ပွီးရငျအဖတျတှဆေယျပီးပဈလိုကျပါ!! အရညျကိုအအေးခံပီး အစာမစားခငျနာရီဝကျအလိုမှာ ဖနျခှကျတဈခှကျစာသောကျပေးပါ!! တဈနေ့3ကွိမျပေါ့!! တဈပတျကွာရငျ … Read more
သုံးရက်အတွင်း ခြေ လက်တွေ ဖြူဖွေးလာစေတဲ့ သဘာဝ အိမ်တွင်းဆေး
သုံးရက်အတွင်း ခြေလက်တွေ ဖြူဖွေးလာအောင် ဆေးနည်းသစ်တခုပေးပါရစေနော် …။သုံးရက်မဟုတ်ဘဲ တစ်ရက်နဲ့ကို သင့် အသားအရေ ထူးခြားလာပါလိမ့်မယ် …။ အထူးသဖြင့် နေလောင်ထားတဲ့ ခြေ၊လက် အသားအရေအတွက် ဒီနည်းက အသုံးဝင်လွန်းပါတယ်။ ပျက်ဆီးနေတဲ့ အသားအရေ ပြန်လည် ဖြူဖွေးချင်တယ် ဆိုရင် အဆင့်(၂)ဆင့် ပြုလုပ်ဖို့ လိုပါတယ် ပထမအဆင့်က ဆဲလ်သေတွေ ဖယ်ရှားတဲ့အဆင့်ဖြစ်တယ်။ scrub လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ဒုတိယအဆင့်က ခြေလက်တွေ ပြန်လည် ဖြူဖွေးလာအောင် ထိန်းသိမ်းရတဲ့အဆင့် …၊ ဒီအဆင့်နှစ်ဆင့်ကို တချိန်တည်း ဆကိတိုက်လုပ်ဖို့ လိုပါတယ်။ ဒီလိုပြုလုပ်ခြင်းအားဖြင့် သင့်အသားအရေဟာ သုံးရက်အတွင်း သိသာလာမှာပဲ ဖြစ်တယ် …။ ပထမအဆင့်- Scrub ဆဲလ်သေတွေ ဖယ်ရှားတဲ့အဆင့်ဖြစ်တယ်။ ဒီအဆင့်မှာ သကြား လက်ဖက်ရည်တစ်ဇွန်းစာ နဲ့ စန္ဒာကူးမှုန့် … Read more
ချိုင်း(ဂျိုင်း)မဲနေလို့ စိတ်ညစ်နေတဲ့ ပျိုမေတွေ အတွက်ဆေးနည်းစွမ်းကောင်းလေးတစ်ခု
ဒီနေ့မှာတော့ ချိုင်း(ဂျိုင်း)မဲနေလို့ စိတ်ညစ်နေရတဲ့ ပျိုမေတွေအတွက် ဆေးနည်းစွမ်းကောင်းလေးတစ်ခုကို ပြောပြလိုက်ပါတယ်နော်။ ၁။ အာလူး အာလူးမှာ အသားအရေကို အရောင်ချွတ်ပေးနိုင်တဲ့ အက်ဆစ်ပျော့တစ်မျိုးပါ။ အာလူးတွေကိုသာ ပါးပါးလှီးပြီး ကပ်ထားပေးလိုက်ရင် ချိုင်းတွေဖြူလာမှာပါ (သို့) အာလူးကိုကြိတ်ပြီး ရလာတဲ့အရည်ကို ချိုင်းမှာသုတ်ပါ။ မိနစ်အနည်းနယ်လောက် နှိပ်ပေးပြီး နောက်ထပ် မိနစ် ၂၀ ကြာရင် ရေနွေးလေးနဲ့ဆေးပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ရက်မှာ ချိုင်းချွေးနံ့ပျောက်ဆေး မသုံးဘဲထားပါ။ အဲ့ဒီလိုမျိုးလေး နေ့တိုင်းသာလုပ်သွားမယ်ဆို ၂ ပတ် (သို့) ၃ပတ်အတွင်း ချိုင်းလေးဖြူလာမှာပါနော်။ ၂။ သခွားသီး သခွားသီးကိုကြိတ်ပြီး အရည်စစ်ယူထားပါ။ ရလာတဲ့အရည်ကို စပရေးဘူးထဲထည့်ပြီးရင် ချိုင်းကြားကိုဖြန်းထားပေးရပါမယ်။ နာရီဝက်လောက်ကြာရင် ခြောက်သွားပါလိမ့်မယ်။ အဲ့ဒီတော့မှ ရေကြက်သီးနွေးလေးနဲ့ ဆေးပေးရမှာပါ။ ၃။ သံပရိုသီး/သံပရာသီး အရေပြားနဲ့ဆံပင်အတွက် သံပရိုသီးက နာမည်ကြီးဆေးတစ်လက်ပါ။ သံပရာသီးလေးနဲ့ … Read more
ကြော်စားစား ကင်စားစား တို့စရာအဖြစ်နဲ့ပဲစားစား အရသာရှိပြီး လူကြိုက်များတဲ့ အစားအစာတစ်ခုကိုပြောပါဆိုရင် ရုံးပတီသီးကမေ့ထားလို့မရတဲ့ စားစရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ရုံးပတီသီးဟာ အရသာရှိသလို ခန္ဓာကိုယ်အတွက် လိုအပ်တဲ့ အာဟာရဓာတ်တော်တော်များလည်းပါဝင်ပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါးလေးမှာတော့ လူတိုင်းကြိုက်တဲ့ ရုံးပတီသီးစားပေးခြင်းဖြင့် ရရှိလာမယ့်အကျိုးကျေးဇူးတွေအကြောင်း မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ နှလုံးကျန်းမာရေးကောင်းစေတယ် – ရုံးပတီသီးမှာ ကိုယ်လက်စထရောပါဝင်မှု မရှိသလောက်နည်းပါးပြီး pectin လို့ခေါ်တဲ့ဓာတ်က ခန္ဓာကိုယ်ကိုအကျိုးမပြုတဲ့ ကိုယ်လက်စထရောပမာဏကိုကျဆင်းစေပါတယ်။ ကိုယ်လက်စထရောကျဆင်းလာတာနဲ့အမျှ နှလုံးကျန်းမာရေးပိုမိုကောင်းမွန်လာပြီး နှလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ရောဂါဖြစ်ပွားနိုင်ခြေလည်း လျော့ကျလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ သွေးတွင်းသကြားဓာတ်ထိန်းညှိပေးတယ် – ဆီးချိုရောဂါသည်တွေအတွက် ရုံးပတီသီးက စားသုံးပေးသင့်တဲ့ ဓာတ်စာတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ရုံးပတီသီးမှာ ခန္ဓာကိုယ်က သကြားဓါတ်စုပ်ယူမှုပမာဏကိုလျော့ချပေးတဲ့ အင်ဆူလင်ဓာတ်များပါဝင်တာကြောင့် သွေးတွင်းသကြားဓာတ်မတက်အောင် ထိန်းညှိပေးပါတယ်။ ဒါ့အပြင်ရုံးပတီသီးဟာ အမျှင်ဓာတ်ကြွယ်ဝတဲ့ အစားအစာတစ်ခုဖြစ်တာကြောင့် အစာခြေစနစ်ကိုလည်း တိုးတက်ကောင်းမွန်စေပါတယ်။ ကင်ဆာရောဂါကိုတိုက်ထုတ်ပေးတယ် – သုတေသနပြုချက်များအရ ရုံးပတီသီးဟာ အခြား ဟင်းသီးဟင်းရွက်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် … Read more
အဘမင်းခေါင်ကြိုတင်မိန့်ထားပုံက—”ကိုလေးတို့ မလေးတို့ ရေ — အနာဂါတ်မှာ ကပ်ကြီးတစ်ခုကြုံကြမယ် ကပ်ကြီးကြုံတဲ့အချိန်မှာ တို့ တိုင်းပြည်မှာ မလွဲမရှောင်သာ ရာဇပုလ္လင်မှာ ဩဇာကြီး မားသူ ဝဲ/ယာ အုပ်စုကြီးနှစ်ခု စိုးစံကြလိမ့် မယ်— ထိုသို့စိုးစံကြတဲ့အခါ အဖွဲ့ စည်းပေါင်းစုံ ပါတီပေါင်းစုံ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ပေါင်းစုံ လည်းပေါ်ကြလိမ့်မယ်— မပူကြပါနဲ့ကွယ် — မိုးလင်းတဲ့အခါ ကပ်ကြီးဘေးက ကိုလေးတို့ မလေးတို့ ပျော်ပျော်ပါးပါးနဲ့ ကျော်ဖြတ်နိူင်ကြမှာပါကွယ်—-။ မြန်မာရောဂါကပ်ဘေးနဲ့မြန်မာရွေး ကောက်ပွဲဆက်ဆပ်နေတဲ့သဲလွန် စ တဘောင်တစ်ခုကိုလေ့လာမိပါ တယ်——- ဘယ်လိုစပ်ဆက် နေသလဲဆိုတော့ ၁၃၁၀ ခုနှစ်မှ ၁၃၁၄ ခုနှစ်အတွင်း ဘိုးတော်အောင်မင်းခေါင် ပုပ္ပါး တောင်ကလာပ်မှာရေးဆပ်ခဲ့တဲ့တဘောင် စာက ဖော်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ်—-“လွဲမထွက်သာ ဝဲဘက်ယာပါမှ ဇတ်မဟာရုပ်စုံထွက်ပြီမို့ မိုးလင်းရင် ဇတ်တော်သိမ်းမည်တဲ့ ပတ်ဆော်ကာ ကပ်ကျော်မဲ့ကိန်းပါပဲ —ဆိုတဲ့ကိုးနဝင်းတဘောင်စာထဲက နောက်ဆုံးအပိုဒ် … Read more